Yethula ukusakaza, okuthunyelwe izithombe namavidiyo
Hola ukusakaza, thumela izithombe namavidiyo
U-LIVE uyinkundla lapho abasebenzisi babelana khona ngezithombe namavidiyo, bahlangane futhi baxoxe online. Yabelana ngokuqukethwe kwakho noma qala ukusakaza ukuze uxoxe nababukeli ngekhamera yewebhu.
Susa imali ekubukeni uye ekhadini lakho noma ku-e-wallet.
Iba umsakazi wohlelo lwakho
Qalisa umbukiso opholile futhi ungeze ukuxhumana okwengeziwe nezibukeli. Xoxa ngezindaba zakamuva, yenza ukuma noma uqale iseshini yokudla isiliva esheshayo- noma lokhu kungenzeka ku-U LIVE!
Imiyalezo ikhokhelwa ababukeli ngakho uthola izinhlamvu zemali zawo wonke amazwana abekiwe.
Ingxoxo yangasese ikwenzela imali eningi njalo ngeminithi.
Ababukeli bangabonga ngokusakaza ngokuthumela izinhlamvu zemali ngokuchofoza okukodwa.
Khetha imisebenzi olungele ukuyenza futhi izibukeli zizokuthumelela izinhlamvu zemali ukubona lo mbukiso.
Yenza imali ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi
Ideshibhodi yakho ingumthombo wemali engenayo. Thumela izithombe namavidiyo, engeza izincazelo ezinhle futhi uqoqe ukubukwa.
Ukubukwa kwesithombe noma kwevidiyo ngakunye kukhokhelwa ngumbukeli; ukubukwa ngakunye okungu-50 - ngesevisi ye-U LIVE
Yabelana ngesixhumanisi ku-Ulive.Chat kumanethiwekhi omphakathi, uwuthumele kuwebhusayithi yakho noma uthumele kubangani bakho ukuthola inzalo ngokuthengwa kwalabo obabandakanyekile.
U-LIVE uvumela imifudlana ye-thematic isebenzisa ukusebenza okwakhelwe ngaphakathi. Akudingeki ucabange ukuthi wenzeni phambi kwekhamera! Khetha ingqikithi nemisebenzi, lungiselela ukuphuma kwakho ngokuya ngekhodi yokugqoka bese uhola ngokuxoxa nabalandeli. Vumela ababukeli baqondise uhlelo lwakho.
Unezinkinga ngokuqeqeshwa njalo? Zama ukuthola izinhlamvu zemali ngesikhathi se-yoga noma nge-pilates!
Khombisa abantu impilo yakho yansuku zonke futhi uyenze ibe mnandi ngokwenza imisebenzi evela kubabukeli.
Unezinyo elimnandi? Thola izinhlamvu zemali zokudla amaswidi kukhamera. Khombisa ababukeli ukuthi uthanda kangakanani ama-carbs!
Ukusakazwa kwe-ULIVE kwethulwa ngokuchofoza kabili nje. Zama futhi ubone ukuthi kulula kanjani lokho!
Thumela umlayezo abokufika ngolimi lwakho lwendabuko kanye ne-autotranslator eyakhelwe ngaphakathi kuzokwenza konke okunye.
Abasakazi abaningi bakhetha ukushiya ubunikazi babo ngasese. U-LIVE ikuvumela ukuthi ukhethe izinga lokungaziwa elingakhululekile. Vele usebenzise ukuvimba komsebenzisi nokufaka omnyama emazweni athile.
Ukuhoxiswa kwemali okulula
Shintsha zonke izinhlamvu zemali ezingama-5000 ziye ku- $ 1. Isamba esincane sokukhipha yi- $ 30.
Sebenzisa i-VISA, Mastercard, Bitcoin, SEPA, izinsiza ze-Bitsafe noma uthole i-invoyisi yokukhipha imali.
Awukholwa ukuthi kulula kangaka?
Kuhlole bese uhola namuhla!